Garee Shanee ABO fii QC ABO jiddutti ammas rakkinni dhalate jedhu | Oromia Shall be Free
Garee Shanee ABO fii QC ABO jiddutti ammas rakkinni dhalate jedhu
bilisummaa April 12, 2016	Comments Off on Garee Shanee ABO fii QC ABO jiddutti ammas rakkinni dhalate jedhu
Oduu Haarawa Asmaraa Irraa
Dubbataan ABO Obbo Toleeraa Adabaa dhiyeenya kana qaamoota lamaan ABO kan bara 2014 walitti dabalaman QC-ABO fi ShG gidduutti rakkinni hamaan dhalatee jiraatuu hime. Haata’u malee, rakkinna dhalate jedhe maal akka ta’e ifa hin goone. Garuu, akka dubbataan kun jedhetti sadarkaa waliin hojjatuu hin dandeenye irra geenyee jira kan jedhu dubbate. Akka Obbo Toleeraan himaa jirutti, rakkinna kana kan uume QC-ABO ti.
Akka murni rakkinna kana uume qoratamuuf, Koreen qorannoo utubamuun isaallee dubbate. Durataa’aan Koree qorannoo kanaa Obbo Ibrahim Muummee ta’uu hime. Kan nama gaddisiisu, garuu, Obbo Ibraahim Muummee koree utubame keessaa hojjii gad-dhiisse jedhe. Rakkinni dhalate maalii dha jedhamee irra deddeebi’amee gaafatamnaan, akka makmaakni Oromoo“Saani dorrobe dhaluun isaa hin hafu” jedhu rakkinni dhalate kunis oolii-bulii, turii-dafii ifatti gad- bahuun isaa waan ooluu miti jedhe. Kanaaf, ammaaf mee na dhiisi jedhe. Ani stole jedhee dhiise.
Previous Sodaanis Ni Injifatama
Next Twitter, WhatsApp Down in Ethiopia Oromia Area After Unrest